Imultimedia - Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
IPipeWire, isakhelo semultimedia esijolise ekubambeni iPulseAudio, sifikelela kuhlobo lwayo 0.3.0
Ukukhutshwa kwenguqulelo entsha yePipeWire 0.3.0 yeprojekthi ibhengeziwe, ephuhliswa njengeserver entsha yemultimedia ...
I-Rhythmbox 3.4.4 ikhupha i-icon entsha kwaye yazisa ezinye izinto ezintsha
I-Rhythmbox 3.4.4, yenye yezona zixhobo zithandwayo zokuphulaphula umculo kwiLinux, ikhuphe inguqulelo entsha ngoyilo ngokutsha lwe icon yayo.
I-Kdenlive 19.12.2 ngaphandle ngoku, kodwa yazisa kuphela iinguqu ezili-13, kubandakanya inkxaso yeQt 5.14
Ngokudibana ne-KDE Izicelo 19.12.2, uLuntu lwe-KDE lukhuphe i-Kdenlive 19.12.2, uhlaziyo oluncinci olungayi kwehla kwimbali njengeyona igqibeleleyo.
IBitwig Studio, isitishi esimnandi kakhulu sedijithali esilawula umculo ophilayo
IBitwig Studio yindawo yentengiso yedijithali enokusetyenziselwa ukwenza umculo, liqonga ...
I-T7 Daw, isikhululo somsindo esinee-multlatform
Apha kwibhlog besikhe sathetha ngayo malunga ne-LMMS eyindawo yokusebenzela yeaudiyo yedijithali ...
I-Kdenlive 19.12.1 iza nezilungiso ezininzi ezibalulekileyo, kunye notshintsho olungenanto yakwenza nokutshintsha konyaka weLungelo lokushicilela
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-Kdenlive 19.12.1, ukukhutshwa kokuqala kokugcina kolu ngcelele ukulungisa iincukuthu.
U-Elisa, isidlali somculo esingagqibekanga kwiKubuntu 20.04 ... okanye nantso injongo
Uluntu lwe-KDE lusebenzela ukwenza umdlali womculo ka-Elisa ukuba ubandakanywe ngokungagqibekanga kwi-Kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Phantse unyaka kamva, iVLC 4 isaphuhlisweni kwaye ayisebenzi kakuhle kwiLinux
IVLC 4 iya kuba yinguqu komnye wabadlali beendaba abaphambili phaya, kodwa bathatha ixesha labo kwaye ngoku linokuphucula.
IKdenlive 19.12 ifika inezinto ezininzi ezintsha ekufuneka ujonge kuzo
Njengoko kuthenjisiwe, iKdenlive 19.12, ngoku iyafumaneka, yinguqulelo ebandakanya izinto ezininzi ezinomdla kakhulu. Siza kukuxelela.
U-Elisa, umdlali we KDE oza kuqala ukusebenzisa kungekudala [Izimvo]
U-Elisa ngumdlali omtsha womculo kunye nelayibrari ekhangeleka intle kakhulu. Ndiza kucacisa ukuba kutheni ndicinga ukuba ndiza kugcina ndiyisebenzisa.
I-Glimpse 0.1.0, ngoku iyafumaneka ngohlobo lokuqala oluzinzileyo lwenye indlela eya kwi-GIMP ... ngegama
Ngoku ikhona i-Glimpse 0.1.0, inguqu yokuqala ezinzileyo yemfoloko ye-GIMP abayikhuphe ikakhulu ukutshintsha igama lesoftware.
Uphicotho-zincwadi 2.3.3 ufika uphucula ukuthunyelwa kwelinye ilizwe, phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo
Uphicotho-zincwadi 2.3.3 ufikile njengonikezelo lolondolozo, phakathi kwezinye izinto, ukuphucula imisebenzi yokuthumela kwelinye ilizwe kwezinye iifomathi.
I-Kodi 18.5 Leia ngoku iyafumaneka, zezi ziindaba zayo
Irhafu 18.5 uLeia sele ephakathi kwethu. Kule nqaku sikubonisa ezona ndaba zibalaseleyo eziza nolu hlobo.
I-ImageMagick ifumana iziqwengana ukulungisa konke ukungakhuseleki okungama-30
I-ImageMagick ihlaziyiwe ukulungisa ukubangumngcipheko okungama-30, alithoba kubo abhalwe njengophambili ophambili.
Inguqulelo elandelayo yeKdenlive iya kuba kukukhululeka okukhulu. Bayathembisa kwaye sinethemba lokuba baya kuyizalisekisa
Njengoko kuthunyelwe kwimithombo yeendaba zentlalo, ingxelo elandelayo yeKdenlive iya kuba kukukhululeka okukhulu kunye neempawu ezipholileyo.
IKdenlive ibuyela kwiVenkile ye-Snap. Ngoku iyafumaneka kwi-Snap, Flatpak kunye ne-AppImage
Umhleli wevidiyo yeKdenlive ubuyela kwiSitolo seSpap emva kokungabikho ixesha elide. Ngoku iyafumaneka kuzo zonke iintlobo zeephakeji.
I-Kdenlive 19.08.2 ifika ukwazisa ukuphucula i-28 kumhleli wevidiyo ye KDE
Ukuqala kwezicelo ze KDE, iKdenlive 19.08.2 ngoku iyafumaneka ukulungisa iyonke yeebugs ezingama-28 kwiinguqulelo zangaphambili.
Inguqulelo entsha yeRhafu "Leia" 18.4 iyafumaneka kwaye ithathe indawo yenguqulo 18.3 kwaye kukuba abaphuhlisi beRhafu babonakala ngathi ...
I-Kdenlive 19.08.1 ngoku iyafumaneka kuhlobo lwePlppak, ifika iinguqu zizonke ezili-18
IKdenlive 19.08.1 ngoku iyafumaneka kuhlobo lwePlppak. Olu luhlaziyo lokuqala lokugcina kolu ngcelele kwaye luza ukulungisa iibhugi.
I-Apple Music Web ikuvumela ukuba umamele ikhathalogu yayo nakweyiphi na inkqubo yokusebenza enesikhangeli
Sele iligosa elisemthethweni, kuba ikwi-beta: I-Apple isungule uhlobo lwewebhu lwe-Apple Music, ke ngoku sinokuyimamela kwiLinux.
I-Kdenlive 19.08 ifika neekhathuni ezintsha zoopopayi, phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo
Ngoku iyafumaneka eKdenlive 19.08, uhlaziyo lwesibini olukhulu lwe-2019 oluza neendaba ezinomdla. Siza kukuxelela.
IVLC 3.0.8 iza, ngokuyinxenye, ukuthintela imiyalezo yezokhuseleko yebug esele ilungisiwe
UVideolan ukhuphe i-VLC 3.0.8, uhlaziyo oluncinci oluzayo, ngokuyinxenye, ukuthintela eminye imiyalezo malunga ne-bug esele ilungisiwe.
I-Shotcut 19.08 ifika inezinto ezininzi ezintsha, kubandakanya ezininzi ukuguqula iifayile kwiibhetshi
I-Shotcut 19.08 ize neendaba ezininzi, uninzi lwazo luqhubeka lupolisha omnye wabahleli bevidiyo esizithandayo.
IBhokisi yoMculo yaseTauon iya ikhula: ingxelo yayo yokuqala ezinzileyo ifika kwaye yile nto isinika yona
IBhokisi yoMculo yaseTauon ngumdlali olula kwaye upakishe amanqaku athi, emva kweenyanga kuphuhliso, efikelele kwinguqulelo yakhe yokuqala ezinzileyo.
Bafumanisa ukuba sesichengeni kakhulu kwiVLC, kodwa iVideLan iyasiqinisekisa ukuba "iVLC ayikhuselekanga"
Kuthe kwafunyanwa ubungozi obubalulekileyo kutshanje kwiVLC evumela isenzo esikude kwiikhompyuter zethu, kodwa ngaba siyinyani?
I-Foliate 1.5.0 ifika ukongeza inkxaso yeAmazon Kindle, phakathi kwabanye
I-Foliate 1.5.0 ifikile neendaba ezibalulekileyo ngohlobo lwenkxaso: ngoku kunokwenzeka ukuba ufunde iifomathi ezihambelana nohlobo lweAmazon.
I-Kdenlive 19.04.3 ifika ukuze iqhubeke nokulungisa ii-bugs ezingeniswe kukhululo olukhulu lokugqibela
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-Kdenlive 19.04.3, inguqulelo entsha eza kulungisa ezinye iibugs kunezo zaziswe kuhlobo olukhishwe ngo-Epreli.
I-Shotcut 19.06, inguqulelo entsha esenza ukuba sicinge ukuba zinobuzaza
IShotcut 19.06 ngoku iyafumaneka kwaye ibandakanya ukuphuculwa okuninzi okusenza sicinge ukuba bafuna ukuba yenye indlela eKdenlive.
I-Kdenlive 19.04.2 ngoku iyafumaneka, ifika ukulungisa i-77 bugs eziyaziwayo
Uhlaziyo lukaJuni lomhleli wevidiyo weKDE owaziwayo, iKdenlive 19.04.2, ngoku iyafumaneka. Ifika ipolishe isoftware.
Ubuntu MATE 19.10 iya kuyishiya i-VLC itshintshele kwi-GNOME MPV
Ubuntu MATE 19.10 Eoan Ermine ayisayi kuphinda ibonelele ngeVLC njengomdlali osilelayo. Iya kuya kwenye engcono kwimeko-bume yakho: I-GNOME MPV.
U-Elisa 0.4.0 ufika ephucula ujongano lomsebenzisi xa ebonisa izinto
Uluntu lwe KDE lukhuphe i-Elisa 0.4.0, inguqulelo entsha ethi yazise ukuphuculwa konxibelelwano lomsebenzisi ngokubonisa izinto kwimbonakalo yegridi.
Inguqulelo yeKdenlive 19.04 APT kuya kufuneka ilinde. Inguqulelo yePlppak, yonke into ilungile
I-Kdenlive 19.04 kuhlobo lwayo lwe-APT ayizukuhlaziywa kude kuthi xa iifosti ezisemthethweni zamkele ukuxhomekeka okutsha. Sichaza ukuba kutheni.
I-pennywise, iwindow edadayo kunye nevidiyo ezivela phantse kuyo nayiphi na iwebhusayithi
Kule nqaku siza kuthetha ngePennywise, umdlali wevidiyo oza kugcina iwindow ejikelezayo kwideskithophu yePC yethu.
Ubuntu Studio 16.04 LTS ifikelela esiphelweni kumjikelo wayo wobomi
Ubuntu Studio 16.04 LTS ifikelele kumjikelo wayo wobomi. Apha sichaza into ekufuneka uyenzile ukusukela ngoku ukuqhubeka nenkxaso.
IKdenlive 19.04 ngoku iyafumaneka, olona hlaziyo lukhulu luza nezinto eziphambili. Sichaza yonke into kuwe kweli nqaku.
I-AV Linux iya kuyeka ukubonelela ngenkxaso ye-32-bit
I-AV Linux izakujoyina usasazo oluya kuyeka ukunika inkxaso kwiikhompyuter ze-32-bit. Umsebenzi wakhe sele ugxile kwi-Debian 10.
UOlivia, umdlali womculo ngenkxaso yomculo kwi-Intanethi
UOlivia ngumdlali womculo onamandla nonobunkunkqele okwaziyo ukudlala kungekuphela umculo wethu wasekhaya, kodwa nomculo okwi-Intanethi.
Ngokwabafundi bethu, aba ngabona badlali bomculo babalaseleyo kwiLinux (2019)
Ngokwamazwana akho, aba ngabona badlali bomculo beLinux. Ngubani oza kuphumelela kweli dabi linzima?
Iingoma zikuvumela ukuba ubone amazwi ale nto umameleyo
Iingoma yiwijethi encinci eya kukuvumela ukuba ubone amazwi ale nto umamele nawuphi na umdlali oyisebenzisayo.
IVidiot-isiHlomelo seVidiyo esilula esigqibeleleyo sabasebenzisi beNovice
Kule nqaku sithetha ngeVidiot, umhleli wevidiyo olula onokusebenzisa nabasebenzisi abangenamava.
INuvola: isidlali sedesktop esele ixhasa iinkonzo ezingama-30 zokusasaza
Isidlali-mculo sokusasaza iNuvola ngoku sixhasa iindlela ezingama-29 ezahlukeneyo. Sikuxelela yonke into ekufuneka uyazi.
I-OpenShot 2.4.4, iza yintoni (abathi) yeyona nguqulelo ibalaseleyo kwimbali yayo
Abaphuhlisi be-OpenShot bayazingca nge-OpenShot 2.4.4, inguqulelo yamva nje ngoku abathi yeyona ilungileyo.
I-Stremio: uyifaka njani le ndlela ipholileyo ye-Kodi kwi-Ubuntu
Kule posi siza kukubonisa indlela yokufaka iStremio ku-Ubuntu, esinye isidlali semithombo yeendaba kunye nelayibrari kwiRhafu eyaziwayo.
Ngaba uyinxalenye yeSiseko seLinux
Iindaba ezimnandi: I-Kodi, isidlali semithombo yeendaba esinamandla kunye nelayibrari, ibe liqabane leLinux Foundation.
Ubuntu Studio iya kuhlala isencasa Ubuntu
Ubuncinci kwiinguqulelo ezilandelayo Ubuntu Studio iya kuhlala iyincasa esemthethweni yoBuntu, kodwa ngaba iya kuqhubeka kunjalo kwixesha elizayo?
Kule tutorial siza kukufundisa indlela yokufaka i-AceStream ku-Ubuntu ngokukhawuleza nangendlela elula ukuze ukonwabele amakhonkco ayo.
I-Lightworks 14.0, uMhleli weVidiyo eyiNgcali, ngoku iyafumaneka; ifika notshintsho olungaphezulu kwama-400
I-Lightworks 14.0, umhleli wevidiyo oqeqeshiweyo, ikhutshwe ngokusemthethweni kwaye ibandakanya uninzi lweempawu kunye namakhulu ezincedisi ezibalulekileyo.
I-OpenShot 2.3, olona hlaziyo lubaluleke kakhulu kumhleli wevidiyo okoko yaqaliswayo
Ukuba ungumsebenzisi we-OpenShot, uya konwaba xa usazi ukuba i-OpenShot 2.3 ifikile, olona hlaziyo lubaluleke kakhulu ukuza kuthi ga ngoku kumhleli wevidiyo odumileyo.
Ungayibukela njani iividiyo zeYouTube ngaphandle kwesikhangeli sewebhu okanye usetyenziso olongezelelekileyo
Icebo elincinci lendlela yokubukela iividiyo ze-YouTube kwisicelo sethu sevidiyo, zonke zisuka ku-Ubuntu kwaye ngaphandle kweefowuni zomntu wesithathu okanye izikhangeli zewebhu ...
Irekhoda eluhlaza, ukhetho olukhulu nolukhanyayo lokurekhoda isikrini kwi-Ubuntu
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abafuna ukurekhoda isikrini sePC yakho yeLinux nangasiphi na isizathu, iGreen Recorder yinkqubo ekuthandayo.
Ngaba ungathanda ukubona imifanekiso engama-360º kwi-Ubuntu? Apha sikubonisa ukuba ungayenza njani usebenzisa le iplagi elula ye-Eye ye-GNOME
Umdlali weGoogle Play Music Player kwiDesktop, umdlali ongekho semthethweni kuGoogle Play Music
Ngaba ungomnye wabasebenzisi abasebenzisa uMculo kuGoogle? Ewe, kule posi sithetha ngokungekho mthethweni kuGoogle Play Music Player kwiDesktop.
Ngaba ujonge abadlali bemidlalo eyahlukeneyo kwaye awazi ukuba yeyiphi oyisebenzisa ku-Ubuntu bakho? Kule posi sithetha ngeendlela ezi-5 ezinomdla.
Ndiyazi. Zininzi ezinye iinkqubo esivumela ukuba sibhale phantsi ikhusi lePC yethu, kodwa kule posi u ...
Uyifaka njani iinguqulelo zamva ze OpenShot
Umhleli wevidiyo ye-OpenShot inenguqulo entsha, kule posi sikubonisa ukuba uhlala usifaka njani na ingxelo yokugqibela ye-OpenShot ku-Ubuntu ...
I-Lyricfier isinika amandla okubona amazwi kwiSpotify
Ngaba uyaphoswa yindlela yokujonga amazwi eengoma kwiSpotify? ILyricfier sisoftware ebuyisela olu khetho kuwe.
I-Avidemux 2.6.15 ifika kunye nokuphuculwa kokuchazwa kwezixhobo
Kule mpelaveki uvuselelo lwe-Avidemux 2.6.15 lufikile, inguqulelo entsha ethe yazisa ukuphuculwa kokuchongwa kwezixhobo kunye nokubhala.
Uyifaka njani i-Streamlink (esekwe kwi-Livestreamer) kwi-Ubuntu
Kule nqaku siza kukubonisa indlela yokufaka i-Streamlink, ifolokhwe yesoftware ngaphandle kwenkxaso ye-Livestreamer, kwi-Ubuntu okanye kwi-Linux Mint.
Iividiyo ezizimeleyo zeYouTube ezivela kwisandla seYout
Sikubonisa ukusebenza kweYout, isidlali sevidiyo seYouTube esisebenza ngokuzimeleyo kwinkqubo yakho yokusebenza yeLinux.
Irediyo ye-GTK ifumana iBeta entsha enemisebenzi emikhulu
I-beta 1 yesicelo seRadio ye-GTK iyafumaneka ngoku, isiya kwinguqulelo yayo elandelayo engu-5.0 eneendaba ezinomdla.
I-Museeks 0.7.0 ifika inenkxaso yezembozo zealbhamu njengeyona nto iphambili
Isidlali museeks somculo sihlaziyiwe. I-Museeks 0.7.0 ifika kunye nenoveli ephambili yenkxaso ye-albhamu.
Fumanisa iSpotify Web Player, iappapp epheleleyo yeLinux
Ngaphandle kokuxhaswa ngokusemthethweni kweSpotify kumxhasi kwiLinux, iSpotify Web Player sisicelo esinjenge-webapp esisebenza njengesiqobo.
I-OpenShot 2.1 ngoku iyafumaneka kwaye iza neendaba ezinomdla
Ngaba ujonge umhleli wevidiyo esemgangathweni weLinux? Ewe, i-OpenShot 2.1 sele ikhona. Sikuxelela iindaba zayo kunye nendlela yokuyifaka kwi-PC yakho.
I-SpotiWeb idibanisa i-Spotify Web kunye nohlobo lwakho lwe-Ubuntu
Ngaba uphoswa kukumamela ngokufanelekileyo kwiSpotify kwi-Ubuntu PC yakho? Ewe, ngena ngaphakathi kwaye ufumane indlela elungileyo yokusebenza: SpotiWeb.
I-10 Desktop Snaps ebhalwe ngoJuni
Kulabo abangaziyo okwangoku, i-Snap luhlobo olutsha lwephakheji ebonakala ngathi sisithembiso esikhulu ...
Ukulungiswa komngcipheko othile weLibreOffice kwi-Ubuntu 16.04 LTS
Kutshanje nje ukuba Ubuntu 16.04 LTS ikhutshiwe kwaye njengoko sisazi kakuhle, ayinakuphepheka ukuba ekuqaleni ...
Ngaba uyafuna ukuzama ingxelo elandelayo yoMdlali weVidiyoLan? Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayifaka njani i-VLC 3.0.0 yokuqala kwi-Ubuntu 16.04.
Lawula iipodcasts zakho nge-gPodder kwi-Ubuntu 16.04
Unxibelelwano kunye nokudalwa komxholo, kokubini kwezentlalo kunye nenkcubeko, kuyatshintsha ukubulela kwi-intanethi. Kwaye ngaba ...
Uyifaka njani iMin, isikhangeli esine-Ubuntu
Inani lolwazi esinalo namhlanje kwi-Intanethi likhulu kakhulu. Ingabonakala ingenamsebenzi, into ...
Hlaziya umphathi weShotwell weSithombe kwi-Ubuntu 16.04
Ngaphandle kwelifu lokungaqiniseki ebelifakwe eYorba ngokubhekisele kwezinye izicelo, kubonakala ngathi ...
Uyisebenzisa njani imibala ye-Emojis ku-Ubuntu
Kubonakala ngathi ii-Emojis zifumana amandla kwihlabathi lonxibelelwano kwi-Intanethi. Sonke siyazi ...
Uyibona njani imozulu kwiXesha kunye neMozulu evulekileyo
Kweli nqaku sifuna ukukubonisa indlela esinokubona ngayo imozulu yangoku kwiTheminali ngendlela epholileyo….
Sala kakuhle ku-Ubuntu Tweak
Namhlanje sikuzisa iindaba ezimbi. Ngokuka-Ding Zhou, umphuhlisi weSixhobo seTweak, bathathe isigqibo sokwenza inqaku ...
Faka iWindowsPress ku-Ubuntu ngamanyathelo amathathu alula ngeDocker
Enye yezinto ekufuneka siyenzile emva kokufaka Ubuntu 16.04, nangaphezulu ukuba sivela kufakelo ...
UClementine uhlaziywa kuhlobo lwe-1.3.0 ngeendaba ezinomdla
Omnye wabadlali ababalaseleyo beLinux, uClementine uhlaziyiwe kuhlobo lwe-1.3.0 kwaye kubandakanya izinto ezintsha ezinomdla.
I-GNOME Twitch 0.2.0 yongeza incoko entsha yengxoxo
Kutshanje, i-GNOME Twitch ihlaziyiwe yohlobo 0.2.0, kwaye ekugqibeleni, kule nguqulelo sele sinayo ...
Uyifumana njani inguqulelo yeKdenlive yamva nje ku-Ubuntu
Isikhokelo esincinci sendlela yokufaka indawo yokugcina izinto zokuncedisa ukufumana ingxelo yokugqibela yeKdenlive, umhleli wevidiyo oyithandayo weProjekthi ye KDE ...
Ungawulawula njani umculo weSpotify kwisindululi ku-Ubuntu
Inguqulelo yamva nje yeSpotify yeLinux ibandakanye iindaba ezinomdla kodwa, njengoko kuqhelekile kunathi ...
Funda ii-comics ku-Ubuntu nge-MComix
Kwi-Ubunlog sifuna ukunikezela ngokungena kwinoveli yemizobo. Kuyamangalisa, kungakanani na ukuba ishishini lokuhlekisa liyaqhubeka ...
Uyifaka njani i-Kodi ku-Ubuntu, kuninzi lweyona multimedia player
Ukuba ujonga umdlali weendawo zonke kwikhompyuter yakho Ubuntu, sicebisa iRhafu. Sikubonisa indlela yokufaka kunye nenye into.
Faka iRhythmbox 3.3 kunye nazo zonke iiplagi zayo
Ku-Ubunlog sihlala sihlawula kakhulu kubomi bemihla ngemihla babadlali beaudiyo. Ke ngoko, sihlala sikuzisa ...
I-OpenShot 2.0 beta ngoku ifumaneka esidlangalaleni. Sikubonisa ukuba uyifaka njani
I-OpenShot 2.0 ibikhona kwi-beta ixesha elide, kodwa ingxelo yesithathu sele ikhutshiwe kwaye iyafumaneka esidlangalaleni. Uvavanye!
I-SMPlayer, umdlali ongasindiyo ku-Ubuntu 15.10
I-SMPlayer ngumdlali ongenasidima, ukongeza ekunikezeleni ukuhambelana kwefayile yemultimedia, uyakwazi ukudlala iividiyo zeYouTube.
Faka iQuod Libet kwi-Ubuntu yakho: ilayibrari yoMculo, umhleli kunye nomdlali konke kubenye
I-Quod Libet ngumdlali womculo osekwe kwiPython esebenzisa ilayibrari yemizobo esekwe kwi-GTK + kwaye…
Fumanisa i-Deepin Music Player, umdlali obalaseleyo we-Ubuntu
I-Deepin Music Player ngumdlali womculo kuBuntu ophuhliswe liqela leLInux Deepin. Inonxibelelwano olucocekileyo kunye nobuchule obukhulu
Uyifaka njani i-Kodi 15.2 kwi-Ubuntu 15.10
Inguqulelo yamvanje yeRhafu, 15.2, ngoku iyafumaneka ukukhuphela kunye nokufaka kwi-Ubuntu 15.10. Sikunika amanyathelo afanelekileyo ukuze ukwazi ukuyenza.
Shotcut, umhleli wevidiyo omangalisayo
I-Shotcut yinkqubo yokuhlela ividiyo simahla esimahla kwaye evumela ukuhlelwa kwevidiyo ngesisombululo se-4K kunye neefilitha.
Inguqulelo entsha yomdlali weYarock ngoku iyafumaneka, khuphela iPPA
I-Yarock sisidlali somsindo esibhalwe kwi-Qt ngokukodwa kwi-Linux, kwaye kweli nqaku siza kukunika indlela yokuyifaka kwaye ube nayo ku-Ubuntu ngokulula.